စက်သီးဘီး - တရုတ် Changzhou Wujin Hengfa စက်
မြို့ပတ် loom များအတွက်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
Shuttle PUSHER များ၏မျက်နှာဖုံး
ကွဲပြားခြားနားသောတရုတ်နှင့်လိုင်းများနှင့်မြို့ပတ်ရထားရက်ကန်း extruding တင်သွင်းတိပ်များအတွက်အပိုပစ္စည်း။
ထောက်ပံ့ထုတ်ကုန်: ပလတ်စတစ်မြို့ပတ်ရထားရက်ကန်းစင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အစက်အစိတ်အပိုင်းများ, တိပ်ဆန့်လိုင်း, ဖဲကြိုးရက်ကန်းစင်များနှင့်ဂျမ်ဘိုအိတ်စသည်တို့ကိုကျနော်တို့အမြင့်မားဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဗွေဆော်အစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ကြသည်။
, ရက်ကန်းစင်များနှင့် winder အစိတ်အပိုင်းများ 2. တစ်ထောင်ကြီးတွေအရေအတွက် output ကို, ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု။
3. ကျနော်တို့အားလုံးနီးပါးတရုတ်ဒီထက်မကနှင့် winder စက်ရုံများမှအစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့ကျနော်တို့ရက်ကန်းစင်များနှင့်တိပ်ဆန့်လိုင်းပေါ်အလုံအလောက်အသိပညာရှိသည်။ နှင့်လည်းအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်။
Hengli winder အစိတ်အပိုင်းများ
PP Bag ယက်လုပ်ခြင်းစက်များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ
PP ယက် Bag Loom သည်အစိတ်အပိုင်းများ
PP Bag ယက်လုပ်ခြင်းစက်အစိတ်အပိုင်းများ
PP ယက် Bag Loom အစိတ်အပိုင်းများ
Alpha6များအတွက်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
ATA Loom သည်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
Hengli Loom သည်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
လိုင်းန့ ်. Hengli တိပ်များအတွက်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
Lohia Loom သည်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
PP Bag ယက်လုပ်ခြင်းစက်သည်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
PP ယက် Bag Loom များအတွက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
Shuanghua Loom သည်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
Starlinger Loom သည်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
Tianfeng Loom သည်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
Yanfeng Loom သည်အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ
အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Yongming Loom အဘို့
နေရပ်လိပ်စာ: Zhaiqiao စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, Changzhou, Jiangsu, တရုတ်
ဖက်စ်: + 86-519-86268228